ईमेल मार्केटिंग: साधारण ग्राहक सूची धारणा विश्लेषण | Martech Zone
बुधवार, मई 27, 2020 बिहीबार, मे 28, 2020 Douglas Karr
ग्राहक अवधारण अखबार उद्योगमा यसको जरा छ। धेरै वर्ष पहिले, मैले अखबार सदस्यता विश्लेषणमा विशेषज्ञता राख्ने डाटाबेस मार्केटि company कम्पनीमा काम गरें। सदस्यताहरूको संभावनामा विभाजन र मार्केटि forका लागि कुञ्जी मेट्रिक्स मध्ये एक तिनीहरूको क्षमतालाई 'कायम राख्न' थियो। हामी (सँधै) राम्रोसँग राम्रो नबन्ने सम्बन्धी बजारहरू लिन चाहँदैनौं, जब हामी गुणस्तरीय सम्भावनाहरू प्राप्त गर्न चाहन्थ्यौं, हामी आसपासका र घरपरिवारलाई मार्केट गर्थ्यौं जुन हामीलाई राम्रोसँग थाहा थियो। अर्को शब्दमा, तिनीहरू १ grab हप्ताको विशेष समातेर पक्राउ गरेनन्, त्यसपछि उनीहरू वास्तवमै नवीकरण हुनेछ र वरिपरि रहनेछन्।
उत्पादनले कत्ति राम्रो गरिरहेको छ र हाम्रो मार्केटिंगले कसरी राम्रो गरिरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्न, हामी निरन्तर हाम्रो ग्राहक प्रतिधारण विश्लेषण गर्ने छौं। यसले हामीलाई लक्ष्यमा रहन मद्दत गर्दछ। साथै, यसले हामीलाई अनुमान लगाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ कि कति जना ग्राहकहरू बसाईन्छन् ताकि हामी हाम्रो अधिग्रहण अभियानहरू अनुसूचित गर्न सक्दछौं। गर्मी महिनाहरूमा जब मानिसहरू छुट्टीमा जान्छन्, हामी कम प्रतिधारण संभावना मार्केट गर्न सक्छौं बस गणना राख्न (ग्राहक गणना = अखबारको उद्योगमा विज्ञापन डलर)।
तपाईंले सूची अवधारणलाई किन विश्लेषण गर्नुपर्दछ?
म इमानदारीसाथ छक्क छु कि, एक ईमेल ठेगानाको मूल्य दिएमा, ईमेल मार्केटरहरूले अवधारण विश्लेषण अपनाएनन्। ईमेल ग्राहकहरूमा अवधारण विश्लेषण धेरै कारणका लागि मूल्यवान छ:
कम प्रतिधारणको साथ उच्च कबाड / स्पाम रिपोर्टिंग आउँदछ। तपाईंको सूची अवधारण अनुगमनले तपाईंलाई तपाईंको प्रतिष्ठा निर्माण गर्न र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको साथ डेलिभिलिटी मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्न मद्दत गर्दछ।
रिटेन्शन लक्ष्यहरू सेट गर्नु भनेको तपाईंको सामग्री सुँघ्नको लागि सुनिश्चित गर्ने उत्तम साधन हो। यसले आधारभूत रूपमा तपाईंलाई बताउँदछ कि एक ग्राहकले जमानत लिनु अघि तपाईंले कति पटक गरीब सामग्री जोखिममा लिन सक्नुहुन्छ।
अवधारण विश्लेषणले तपाईंलाई भन्छ कि खराब सूचिकरणहरू कत्ति खराब छन् र कति ग्राहकहरूले तपाईंको सूची गणनालाई कायम राख्न थप्न आवश्यक छ र; नतिजाको रूपमा, तपाईंको राजस्व लक्ष्यहरू।
कसरी तपाइँको ईमेल सदस्यता सूची मा धारणा र मापन मापन गर्न
यहाँ मैले आपूर्ति गरेको उदाहरण पूरै बनेको छ, तर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसले कसरी मद्दत गर्दछ। यस अवस्थामा, (चार्ट हेर्नुहोस्) त्यहाँ weeks हप्तामा अर्को ड्रप छ र अर्को १० हप्तामा। यदि यो वास्तविक उदाहरण हो भने, म चार हप्ताको मार्कमा केही गतिशील सामग्री राख्न चाहान्छु कि यसले अभियानमा केहि zip थपे! हप्ता १० मा उही!
सुरू गर्न, मैले स्प्रिडशिटलाई आधारभूत रूपमा प्रयोग गरिरहेको छु हरेक ग्राहक लिन्छ र उनीहरूले सुरु गरेको मिति र उनीहरूको सदस्यता रद्द मिति गणना गर्दछ (यदि तिनीहरूले सदस्यता रद्द गरेको छ भने। गणनाहरू जाँच गर्न नबिर्सिनुहोस् - तिनीहरू जानकारी लुकाउने राम्रो काम गर्दछन् जहाँ खाली हुनुपर्दछ)। र शर्तहरूमा मात्र गणना गर्दै।
तपाईंले परिणामस्वरूप ग्रिड देख्नुहुनेछ तिनीहरू सदस्यता लिने कुल दिनहरूमा तिनीहरूले सदस्यता लिइसकेका थिए भने। यो जानकारी हो जुन म विश्लेषणको दोस्रो अंशमा प्रत्येक हप्तामा अवधारण दर गणना गर्न प्रयोग गर्दछु।
एक धारणा वक्र कुनै पनि उद्योग मा सदस्यता मानक मा राम्रो मानक हो, तर यो अन्य उद्योगहरु को लागी अवधारण विश्लेषण गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ - खाना वितरण (कति पटक वितरण र कति पटक राम्रो को लागी छोड्नु अघि ... शायद एक विशेष 'धन्यवाद' ठीक त्यो भन्दा पहिले पोइन्ट क्रमबद्ध छ), कपाल काट्ने, चलचित्र भाडा ... तपाइँ यसलाई नाम दिईन्छ र तपाइँ तपाइँको ग्राहकको लागि अट्रेसन र रिटेन्सन गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
ग्राहकहरू सम्हाल्न सामान्यतया नयाँ व्यक्तिहरू प्राप्त गर्न भन्दा कम खर्चिलो हुन्छ। तपाईं अवधारण विश्लेषण गणना र आफ्नो अवधारण घटता मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो नक्कली उदाहरणको साथ तपाईले देख्नुहुनेछ कि केवल मेरो सूची गणनालाई कायम राख्न मैले केही महिना भित्रमा थप +० + +% थप्नु पर्छ। अवधारण विश्लेषणको लागि हाल कुनै ईमेल मार्केटिंग मापदण्ड छैन - त्यसैले तपाईंको उद्योग र तपाईंको अभियानहरूमा निर्भर गर्दछ, तपाईंको सूची अवधारण र एट्रेसन नाटकीय रूपमा भिन्न हुन सक्दछ।
एक एक्सेल रिटेन्शन स्प्रेडशीट डाउनलोड गर्नुहोस्
नमूना एक्सेल स्प्रेडशीट डाउनलोड गर्नुहोस्
यो केवल एक प्राथमिक नमूना हो जुन मैले यस पोष्टको लागि सँगै राखें। यद्यपि यो सबै जानकारी होल्ड गर्दछ तपाईको अवधारण विश्लेषण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। केवल तल दिइएको चार्टमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र स्प्रेडशीट डाउनलोड गर्नका लागि 'सुरक्षित गर्नुहोस्' गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई आफ्नो सूचीहरूमा विश्लेषणको यस प्रकारको कार्यान्वयन गर्न सहयोग चाहिएमा मलाई खबर दिनुहोस्! यो वास्तवमै काममा आउँदछ जब तपाईंसँग पारिवारिक, जनसांख्यिकीय, व्यवहार, सामग्री, र खर्च डाटा। तपाइँको मार्केटिंग र सामग्री श्रोतालाई राम्रो लक्षित गर्न तपाइँले केही अविश्वसनीय विभाजन गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
टैग: ईमेल सूत्रईमेल सूची टर्नओभरईमेल मेट्रिकईमेल प्रतिधारणएक्सेलसूची प्रतिधारणसूची कारोबारअवधारणग्राहक प्रतिधारण
डिजिटल वालेटको साथ मोबाइल रूपान्तरण दरहरू कसरी सुधार गर्ने